၇။ အဆိုးဆုံးအဖြစ်အပျက်များကိုကြည့်ရှုရန် (၁) ငါဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့သလဲ။
Porn စွဲ၏အဆိုးဆုံး-ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း Beat မှ7သိကောင်းစရာများ (ကျနော်လုပ်ကြံဘယ်လို)
ယောက်ျားတွေမင်္ဂလာပါ။ ဤနေရာတွင် Dominic ။
ငါသည်သင်တို့ကိုငါသည်ငါ၏အသက်ပြည့်စုံအသွင်ပြောင်းအောင်ဖို့အသုံးပြုကြောင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအကြံပေးချက်များ7ပေးရမယ့်နေပါတယ်။
အသက် ၁၁ နှစ်ကနေ ၁၈ နှစ်ကြားနေ့တိုင်းတစ်နေ့ကို ၁-၃ ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာတစ်နေ့ကို ၁ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်အထိတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေတာဖြစ်တယ်။ ဒါကကျွန်မရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဘ ၀ ရဲ့ ၇ နှစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါစိတ်ကူးနိုင်သမျှအဆိုးဆုံး ED ရှိခဲ့တယ်။
ဤအကြံပြုချက်များကိုသုံးပြီး; ငါ့အသက်ကိုအဆွေတို့အဘို့အရှုံးသမားအတူအနိုင်နိုင်အတန်းဖြတ်သန်း, တစ်ဦးအရှုံးသမားဖြစ်ခြင်းကနေအမာခံဗီဒီယိုဂိမ်း junky ဝင်သဖြင့်, စင်ကြယ်သောတန်ခိုးအာနုဘော်ရန်။
1 ။ ငါအရာအားလုံးကို Reboot-Related အကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြောင်းကြား
ငါဂယ်ရီ Wilson ၏ဝက်ဘ်ဆိုက် (YourBrainOnPorn.com) ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Gabe Deem ရဲ့ဗွီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်။ ငါအောင်မြင်သောဇာတ်လမ်းများကိုဖတ်ရှု။ မည်သည့်အရာနှင့်အတူတကွ ပူးပေါင်း၍ အလုပ်မလုပ်သည်
2 ။ ငါသည်ငါ့အတွေးအခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲ
ငါရက်ပေါင်း ၉၀ ထိရောက်နိုင်မလားဆိုတာစမ်းကြည့်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူး။ ငါလုပ်တယ်ဒါကြောင့် Porn ဟာရွေးချယ်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူး အစဉ်အဆက်ကိုထပ်
3 ။ ငါအကြီးအကျယ်အတုဆွမှုပုံစံအားလုံးကိုလျှော့ချ
ဤသူသည်ငါ Youtube ကို၏အဆုံးမဲ့ပမာဏစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ဆိုလိုပါတယ်။ အစဉ်အမြဲငါ, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုဖြတ်။ ကျွန်မအဖြစ်တာကို web surfing တော့ဘူး။ ငါသည်ငါ၏ဧည့်ခန်း (ဂါယူဆပါသည်မှ S / O) ၌ငါ့ laptop ကိုထားတော်မူ၏။ Facetiming အမျိုးသမီးတော့ဘူး။ ငါ Netflix, တီဗီကိုကြည့်ရပ်တန့်နဲ့ကျွန်မရုပ်ရှင်သွားတော့ဘူး။
4 ။ ငါပွငျသို့ထှကျ
ငါပျင်းဖြစ်လာခဲ့သည်အခါတိုင်းကျွန်မလမ်းလျှောက်သွား၏။ ကျွန်မစာအုပ်တွေဖတ်ပါ။ ငါထွက်သွားကြ၏နှင့် (ပင်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူ) သွားလာခြင်းမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းတယ်။ ငါတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်တောင်တက်ဘတ်စကက်ဘောကစားခြင်း, ကျန်းမာပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများလုပ်နေတော့တာပဲ။ ငါစားနှင့်ပိုပြီးရေသောက်ရ၏။ ငါအရူးကဲ့သို့အားကစားရုံမှာထွက်အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။
5 ။ ငါကျန်းမာလှုပ်ရှားမှုများထိန်းသိမ်းထား, သူတို့လုပ်နေတဲ့ကတိကဝတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
တစ်တိုးမြှင်များအတွက်အပြင်ဘက် Going တစ်ချိန်ကလွယ်ကူပါတယ်။ , ဘာမှနှင့်အတူတနင်္ဂနွေညဉ့်တွင် 15 မိနစ်အားကစားခန်းမမှာထွက်အလုပ်လုပ်လွယ်ကူပါတယ်။
ဒါပေမယ့်မှန်မှန်သည်ဤလှုပ်ရှားမှုများလုပ်နေအစစ်အမှန်စိန်ခေါ်မှုပါ! ကျွန်မမှန်မှန်သူတို့ကို ပြု. , ယခုကျေနပ်စရာပြန်လည်နာလန်ထူ၏အကျိုးကျေးဇူးများရိတ်နေပါတယ်။
6 ။ ငါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတယ်
တစ်ဦးတိုင်ပင်ရှာဖွေခြင်းငါ၏အ reboot လုပ်ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတစ်လတစ်ကြိမ်သူမ၏နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်, သူလမ်းကြောင်းအပေါ်ငါ့အသက်ကိုရဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူမလည်းကျနော်ပထမဦးဆုံးဌာန၌ Porn စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုထွက်တွက်ဆကူညီပေးခဲ့သည်။ တိုင်ပင်မှူးမတ်သင်တစ်ဦးသန်းနှစ်ကောင်နဲ့တူခံစားရပါစေ။ အစဉ်မပြတ်ငါတစ် session တစ်ခုပြီးနောက်ကြီးမားသောယုံကြည်မှုထပ်တိုးလာပြီသတိရ; နှင့်အစဉ်အမြဲငါထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြောင်းပိုမိုထွက်နေသေးတယ်။ ဒါဟာ-ရှိရမည်ပဲ! မှန်မှန် YBR, YBOP နှင့် NoFap စစ်ဆေးနေအဖြစ်ကောင်းစွာကူညီပေးခဲ့သည်။
ငါပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုတာသိတယ် တစ်ခါတလေကျွန်မအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျလာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေဖို့စဉ်းစားမိတယ်။ ငါစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာမှတ်မိသေးတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်မူ၎င်းသည်ကျိုးနပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ပြီးတော့ဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်ငါမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဥမင်၏အဆုံးကိုရောက်လိမ့်မယ်။ မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါဟာအရင်ကထက်ပိုကောင်းတယ်၊ သူငယ်ချင်းများစွာနဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့လူမှုရေးလိပ်ပြာတစ်ကောင်ပါ။ ကျွန်မမှာမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေရှိခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်တယ်။ (သူတို့ကကျွန်တော့်ဆီကိုလာကြတယ်။ ထူးဆန်းပေမဲ့အေးတယ်) ဘယ်သူ့ကိုမှစကားမပြောနိုင်ဘူး။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတည်ငြိမ်အောင်အရက်ကိုသုံးခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်၊ ငါ "မူး" ခံစားရ 24/7 ။ ငါသက်သာတယ်
ဒါကြောင့်အများအားဖြင့်ငါလုပ်ခဲ့တယ်ပုံပါပဲ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်အားလွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆက်သွယ်ပါ။ ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်ကောင်းသောကံသူချင်း rebooters